Mootummaan akka hojjetuuf yeroo kennuufiin barbaachisaadha
Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa haala nagaa dhabuu biyyattiirraa ka'uun waggaa tokko dura haaromsa gadi fagoo taasisuun hanqinoota jiran furee hojjechuuf hojiitti seeneera. Naannooleenis sadarkaa sadarkaadhaan haaromsa taasisaa jiru.
Keessumaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hoggansi haarawaa Obbo Lammaa Magarsaatiin caaseeffame jijjiiramoota jajjabeessoofi abdachiisoo ummata biyyattiirra darbee qaamolee biyya alaa ajaa'ibsiise fideera. Kanaanis kontiroobaandiistoonniifi sassaabdoonni kiraa hedduu mufachuudhaan Oromiyaan tasgabbii dhabuun naannawaa jeequmsaafi wal ajjeechaa akka taatuuf rafanii hinbulle.
Mootummaan Oromiyaas haaromsaa as guyyaa tokkollee hojmanee ummanni kenneef osoo hinhojjetiin hafeera jechuun rakkisaadha. Yeroo dhihoo as mootummaa fedeeraalaa waliin ta'uun gaaffiiwwan ummata Oromoo isaan ijoo ta'aan akka hiikamaniif dhiibbaa taasisuun murtoo boonsaarra akka ga'amu taasiseera. Keessumaa hidhamtoonni siyaasaa sababa eenyummaasaaniitiin hidhaman akka hiikamaniif ejjennoo qabate falmuun mootummaa ADWUI amansiisuun murtoon akka darbu taasiseera.
DhDUOn yaa'ii dhaabbattummaasaa tibbanaatiinis waadaa seename sadarkaa irra jiru qorachuun ammas fiixaan ba'umsisaa akka ariifatuuf sochii taasisaa jiraacguusaa ibseera. Kun adeemsa irra utuu jiruu torban kana sababa hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jedhuufi gaaffiilee birootiin lagannaan gabaafi hojii dhaabuu guutuu Oromiyaatti labsamee, keessumaa Wiixaafi Kibxata darbe bifa guutuu ta'een hojiirra ooleera.
Rakkoofi gaaffiin ka'e dogoggoora osoo hintaane mootummaan hojmaneesaa akka hojjetuuf yeroo kan kenne akka hinturredha Sadarkaa Pirezdaantii Ittaanaatti, Hogganaan Waajjira DhDUO Giddugaleessaa Doktar Abiyyi Ahimad kan ibsan.
Akkasaan jedhanitti, wayita ammaa mootummaan Oromiyaa guyyaa guyyaan ajandaa qaamni biraa uumu tasgabbeessuuf jecha harka tokko qabamee harka tokkoon hojjechaa jira. Kun ammoo gaaffii ummataa bara dheeraaf kuufamee jiru harka lamaan hojjetanii akka hindeebifne isaan taasisaa jira. Ummanni harka lamaan akka hojjatuufi hiikamee akka fiigu ajandaa guyyaa guyyaan bocamu mootummaarraa qabuu dandeenyaan hojii addaa hojjechun yeroo gabaabaa keessatti ummata gammachiisuun ni danda’ama.
Ummannis kana hubatee tokkummaan jalqabame kun jabaatee akka deemuuf hunda caalaa wal dhaggeeffachuu akka qabu kaasanii, gaaffiiwwan ka'an akka deebii argataniifis yeroon kennamuu qaba jedhu.
Rakkoon yeroo amma mul'achaa jiru gaaffii gaafachuun cinatti qabeenya balleessuu ta'uu kan eeran Doktar Abiyyi, qabeenya balleessuun Oromummaa balleessa malee kan jabeessu akka hintaane ibsu. Gochaa hintaane irratti hirmaachuun maqaan dargaggoota akka baduufis daandii kan saaquudha jedhu.
“Dargaggoon keenya humna keenya. Haa ta’u malee, dargaggoo keenyatti maqaa hintaane itti baasanii miidhuuf yaaluun immoo sirrii miti. Miidhaan isaa kan qaqqabu qeerroodhuma keenyarratti. Kanaaf qeerroon Oromiyaa hoggantoota isaanii dhaggeeffachuu qabu. Gara fuulduraattis hoggantoota isaanii dhaggeeffachuun socho’uu qabu. Dabalataanis qeerroon Oromoo waan aarsaa itti baasuu qabu hubachuun badiifi gocha maqaa Oromoof Oromummaa balleessuu irratti hirmaachuurraa of qusachuu qaba” jechuun dhaamu.
Walumaagalatti, gaaffii ummanni kaasu sirriifi gaaffii mirgaa ta'uun isaa wal nama hinfalmisiisu. Haalli itti dhihaatu garuu eenyuunuu karaa hinmiineen akkasumas, gaafficha deebisuuf yaalii mootummaan taasisu xiinxaluun yeroo barbaachisu kennamuufii qaba.
Torban kana/This_Week 10575
Torban darbe/This_Month 96932
Guyyaa mara/All_Days 1435355